Rayson | igbe mmiri
Mepụta afọ gara aga, Rayson bụ onye na-emepụta ọkachamara na kwa onye na-eweta ike siri ike na mmepụta, chepụta ya, na R & D. Igbe mmiri Rayson bụ onye na-emepụta zuru oke na onye na-eweta ngwaahịa dị elu na ọrụ otu nkwụsị. Anyị ga-eme ya, dịka oge niile, na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara igbe akwụkwọ ozi anyị na ngwaahịa ndị ọzọ, na-eme ka anyị mara. Uwe ahụ na-enyere mmadụ aka ịtụgharị uche. Otu onye nwere ike ikwu nkwupụta ma kwupụta onwe ya ma ọ bụ onwe ya na nzuzo ndị mmadụ.